20 Kuzvinunura manzwi emunamato | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Kuzvinunura manamato emunamato
20 Kuzvinunura manamato emunamato
Pisarema 139: 23-24:
Nditsvakei, Mwari, muzive moyo wangu; ndiidzei, muzive mifungo yangu. 23 Muone kana paine nzira yakaipa mandiri, mundifambise munzira isingaperi.
Kuzviongorora pakunamata kwakakosha zvakanyanya muhupenyu hwedu hwechiKristu. Hatifanire kurerutsa basa remuviri (chimiro chezvivi) mukufamba kwedu naMwari. Nguva nenguva tinofanira kuzvishongedza pachedu kuti pamweya tigoona kwatinoda kuvandudzwa muhupenyu hwedu. Izvi makumi maviri kuzvinunura mapepa emunamato achashanda segwara rekununurwa kwedu pachedu. Iyi minamato yekununurwa ichatibatsira apo patinoita mweya mutsvene kuti utinatse kusarurama kese nemhando dzese dzeudyire muhupenyu hwedu.
Rangarira, kana tichiti hatina zvivi, tinozvinyengedza uye chokwadi hachisi matiri 1 Johane 1: 8-9. Isu tinofanirwa kugara tichizvinunura uye nekuzvinatsa pachedu apo tichimhanya nhangemutange yeruponeso. Zvakakosha apa kuti uzive kuti izvi hazvireve kuti tiri vatadzi, kana kuti Mwari aramba vana Vavo, aiwa, unongova munamato wekuvandudza wega. Munamato unoita kuti tirambe tichiongorora uye unotiyeuchidza kuti isu hatina simba asi Iye akasimba, munamato unogara uchitisimbisa tichivimba naMwari. Mwari vanoda vana vake zvinogara zviripo, asi isu tinofanira kuramba tichivimba naye muminamato kuti rudo rwake ruenderere kuyerera kubva kwatiri kune vamwe. Iyi yega yekununura minamato mapoinzi ichavandudza hupenyu hwako hwechiKristu. Rinamate kazhinji uye unamate naro nekutenda. Ndiri kuona Kristu achiratidza mauri nhasi ameni.
1. Ini ndinozvisunungura kubva kumadziro ese emadzitateguru asina kunaka kukanganisa hupenyu hwangu hwechikristu, muzita raJesu.
2. Ndinozvisunungura pahukama hwese hwedhimoni hunobva pachinamato chevabereki vangu chiri kukanganisa hupenyu hwangu, nemuzita raJesu.
3. Ini ndinozvisunungura kubva pamweya wedhimoni, kubva parutivi rwechitendero changu chamadhimoni, muzita raJesu.
4. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kuchimiro chose chechivi chiri kukanganisa uchapupu hwangu hwechiKristu, muzita raJesu.
5. Ndinozvisunungura kubva mukuwadzana kose kwakaipa, muzita raJesu
6. Wese satanic achirwa neupenyu hwangu ngaave asina zvibereko muzita raJesu.
7. Rega muvengi wese wehupenyu hwangu uye mafambiro arikutsvaga kudzika kwangu aparadzwe zvizere nesimba iro muropa raIshe Jesu.
8. Ini ndinoraira zvimiti zvese zvakashata muhupenyu hwangu, buda, muzita raJesu!
9. Wese mutorwa akaipa muhupenyu hwangu, ini com uye newe kuti ubude kunze muzita raJesu.
10. Nesimba remweya mutsvene, ndinoisa nyama yangu pasi pekuzviisa pasi muzita raJesu.
11. Baba vangu, rambai muchindinunura kubva pamhando dzose dzekuyedzwa muzita raJesu.
12. Ndinozvinatsa pazvese zvakashata dhiabhori muzita raJesu.
13. Rega zvinhu zvese zvisina kunaka zviri kutenderera muropa rangu zvifuratwe neropa raJesu, muzita raJesu.
14. Ndinozvifukidza neropa raJesu, muzita raJesu.
15. Baba ngavatendese kubuda kwako kubva korona yemusoro wangu, kusvika pauri! Zvetsoka dzangu, kutyora joko rega rehuranda muhupenyu hwangu muzita raJesu.
16. Ndakazvicheka kubva pamhando dzose dzeusimbe hwomweya muzita raJesu.
17. Ndakazvicheka kubva kumweya yese yeruchiva muzita raJesu. Ndakazvicheka kubva kumweya yese inonyengera nemuzita raJesu.
18.Mweya Mutsvene moto, suka hupenyu hwangu muzita raJesu.
19. Ndinoreva kusunungurwa kwangu kwakazara, muzita raJesu, kubva kumweya yese yemadhimoni muzita raJesu
20. Ndinotyora kubata kwesimba rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
Ndatenda Jesu nekusunungurwa kwangu kwakazara.
Previous nyayaMakumi maviri eminamato yekutungamira kwaMwari uye nechirongwa
inoteveraKuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 30th Gumiguru 2018
Brian Chivabvu 4, 2020 Na7: 09 am
Mufundisi handikwanise kukutendai zvakakwana
Kune iyi minamato
Sharron matanda Kurume 8, 2021 At 12:14 pm
Mashoko haagoni kuratidza kuti minamato iyi ine zvainoita kwandiri
nguva yekunamata mazuva ese! Ndatenda.
Chukwudike Imo Uche Chikumi 15, 2021 Panguva ya1: 22 pm
Munamato uyu ndichangopedza kunamata wanga wachinja hupenyu hwangu zvachose, ndanunurwa, Ameni.
50 Minamato YeMinamato Kupesana neKuparadza Kuuraya
Minamato Yemunamato Kupesana Nekusagadzikana Muwanano
Munamato Wekununurwa Kubva Pakusvuta